5 Iidashibhodi eziHlaziyiweyo zikaGoogle ezingayi kukoyikisa | Martech Zone
5 Iidashibhodi eziHlaziyiweyo zikaGoogle ezingayi kukoyikisa
NgoLwesibini, Juni 23, 2015 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 UChris Neumann
Uhlalutyo lukaGoogle lunokoyikisa kubathengisi abaninzi. Okwangoku sonke siyazi ukuba zibaluleke kangakanani izigqibo eziqhutywa yidatha kumasebe ethu okuthengisa, kodwa uninzi lwethu alazi ukuba luqale ngaphi. Uhlalutyo lukaGoogle sisixhobo sombane esine-analytically-minder, kodwa sinokufikeleleka ngakumbi kuninzi lwethu.
Xa uqala kuGoogle Analytics, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukophula eyakho kubahlalutyi kumacandelo alinganayo. Yenza iideshibhodi ngokubhekisele kwinjongo yokuthengisa, icandelo, okanye isikhundla. Ukusebenzisana kwesebe kubalulekile, kodwa awufuni ukuqokelela iideshibhodi zakho zikaGoogle ngokutshova yonke itshathi oyifunayo kwideshibhodi enye.
Ukwenza ngokufanelekileyo ideshibhodi yeGoogle Analytics, kuya kufuneka:
Cinga ngabaphulaphuli bakho - Ngaba le yideshibhodi yokwenza ingxelo yangaphakathi, umphathi wakho okanye umxhasi wakho? Uya kudinga ukubona iimetrikhi ozilandelayo kwinqanaba legranular ngakumbi kunomphathi wakho, umzekelo.
Kulumkele ukungqubana -Zisindise kwintloko yokuzama ukufumana itshathi efanelekileyo xa uyifuna ngokulungiselela iideshibhodi zakho kakuhle. Iitshathi ezintandathu ukuya kwezilithoba kwideshibhodi nganye zilungile.
Yakha iideshibhodi ngesihloko Indlela elungileyo yokuphepha ukungqubana kukubeka ngokwamaqela iideshibhodi zakho ngesihloko, injongo okanye indima. Umzekelo, unokubeka iliso kwimizamo ye-SEO kunye ne-SEM, kodwa uya kufuna ukugcina iitshathi kumzamo ngamnye kwideshibhodi eyahlukileyo ukunqanda ukudideka. Umbono wokuboniswa kwedatha kukuba ufuna ukunciphisa uxinzelelo lwengqondo, ke iindlela kunye nokuqonda kuyaphuma kuthi. Ukwahlula-hlula iitshathi kwiideshibhodi ngokuxhasa isifundo.
Ngoku ukuba unezikhokelo ezithile engqondweni, nazi ezinye zezinto ezisebenzayo kwideshibhodi nganye kaGoogle yoHlahlelo (Qaphela: Yonke imizobo yedashboard yedatha kaGoogle yokuHlola IdathaHero):
I-AdWords Dashboard-YeyePPC yeMeter
Injongo yale dashboard kukunika isishwankathelo sendlela eliqhuba ngayo iphulo ngalinye okanye iqela lentengiso, kunye nokujonga inkcitho ngokubanzi kunye nokuchonga amathuba okwenza ngcono. Ukwafumana inzuzo eyongeziweyo yokungafuneki uskrole kwitafile yakho yeAdWords ngokungapheliyo. I-granularity yale dashboard ixhomekeke kwiinjongo zakho kunye nee-KPIs ewe, kodwa ezinye iimetriki zokuqala ekufuneka ziqwalaselwe zezi:
Iindleko ngokufunyanwa (CPA) kunye nokuchitha ixesha
Utshintsho ngokuhambelana nombuzo wophendlo
Ixabiso eliphantsi ngokuFunyanwa (CPA)
Umxholo weDashboard-weMarketer yeMarket
Iibhloko ziye zaba ngumqolo kuninzi lweenzame zethu ze-SEO njengabathengisi. Ihlala isetyenziswa njengokukhokela umatshini we-gen, iibhloko zinokuba kukunxibelelana kwakho okokuqala nabathengi bakho abaninzi kwaye zisetyenziselwa ikakhulu ukwamkelwa kwegama. Nokuba yeyiphi na injongo yakho, qiniseka ukuba uyila idashboard yakho unale njongo engqondweni ngokujonga umxholo ukubandakanyeka, izikhokelo ezivelisiweyo kunye nokugcwala kwendawo yonke.
Ixesha kwindawo (eyaphukileyo ngeposi blog)
Iiseshoni ngeposi yeblogi yeposi yeblogi
Bhalisa ngeposi yebhlog / icandelo leposti yebhlog
Ababhalisi beWebinar (okanye ezinye iinjongo zomxholo)
Iiseshoni ngumthombo / ngeposi
Ixabiso lokuhlawula ngumthombo / ngeposi
Ideshibhodi yokuGuqula iSiza -KweSahlulo sokuKhula
Iphepha lasekhaya kunye namaphepha okufika kulindeleke ukuba aguqule- nokuba yeyiphi na umbutho wakho echaza uguquko. Kuya kufuneka uvavanye la maphepha ngo-A / B, ke kuya kufuneka ujonge ngononophelo ukuba amaphepha okufika aqhuba njani ngokusekwe kwezi mvavanyo. Kwimakethi yentengiso ekhula ngokukhawuleza, ukuguqulwa kubalulekile. Gxila kwizinto ezinje ngemithombo ephezulu yokuguqula, inqanaba lokuguqula ngephepha, okanye inqanaba lokuhlawula iphepha / umthombo
Iiseshini ngokufika kwephepha / umthombo
Ukugqitywa kweenjongo ngokufika komhlaba / umthombo
Inqanaba lokuguqula ngokufika komhlaba / umthombo
Ireyithi yokubuyisa ngokufika kwephepha / umthombo
Qiniseka ukuba ulandelela ngononophelo naluphi na uvavanyo lwe-A / B ngomhla. Ngale ndlela, uyazi kakuhle ukuba yintoni ebangela utshintsho kumanqanaba okuguqula.
Ideshibhodi yeMetriki yeSayithi-yeMarket yeGeeky
Ezi metric zinobuchwephesha obuhle kodwa zinokwenza umahluko omkhulu malunga nokwenza ngcono indawo yakho. Ukumba nzulu nangakumbi, jonga indlela ezi metric zobuchwephesha zinxibelelana ngayo nomxholo okanye iimetrikhi zentlalo. Umzekelo, ngaba bonke abasebenzisi bakho be-Twitter beza ngeselula kwiphepha elithile lokufika? Ukuba kunjalo, ke qiniseka ukuba iphepha lokufika lenzelwe iselfowuni.
Ixesha elichithwe kwisiza ngokubanzi
Amanqanaba aphezulu e-KPIs-Kwi-VP yokuthengisa
Uluvo lwedashboard kukwenza ukugcina iliso kwiimetrikhi kulula kakhulu. Ngenxa yoko, awunyanzelekanga ukuba udibane nabantu abahlanu abahlukeneyo kwisebe lakho ukuze ufumane umbono wezempilo kwimizamo yakho yokuthengisa. Ukugcina yonke le datha kwindawo enye kuqinisekisa ukuba naluphi na utshintsho kwintsebenzo yentengiso aluyi kuqatshelwa.
Ikhokela ngomthombo / ngephulo
Ukusebenza kwentengiso ye-imeyile
Impilo yefaneli iyonke
Ukunxibelelana ngexabiso lokuthengisa kuwo wonke umbutho, sonke siya sixhomekeka ngakumbi kwidatha. Kufuneka sihlalutye ngokwaneleyo ukuze siqokelele idatha elungileyo, siveze ukuqonda okuphambili kwaye sinxibelelane nabo sibuyele kwimibutho yethu. Kungenxa yoko le nto ungenakukwazi ukungazihoyi izixhobo ezibalulekileyo ezinje ngeGoogle Analytics, ngakumbi xa uyaphula iye kulunywa ngakumbi, njengedashboard.
tags: Ukuchitha intengiso eminiuhlalutyo kwideshibhodiizinga lokuhlawulaizinga lokuhlawula ngumthombouhlalutyo lomxholoumxholo wemetrikiUhlalutyo loguquleloIinguqulelo zokuguqulainqanaba lotshintshoUtshintsho ngephulouguquko ngombuzo wophendlocpaidatha yeqhaweiinkcukachaideshibhodi yedeshibhodiukugqitywa kwenjongoi-google analyticsKPIUkuhlalutya iphephaidashboard yephepha lokufikai-metric zephepha lokufikacpa esezantsiintengiso kpiukusetyenziswa kwefowuniinkqubo yokwenzaisisombululo sekriniiiseshoniiiseshoni ngeposiiiseshoni ngomthomboixesha kwisizaiiseshoni zomsebenzisiababhalisi bewebhu
UChris Neumann nguMseki kunye neGosa eliyiNtloko leMveliso IdathaHero, umboneleli ophambili wenkonzo yokuzenzela ye-Cloud BI. Emva kokunceda ekwenzeni indawo eNkulu yeDatha kwiiNkqubo zeDatha yeAster, uchithe iminyaka emine edlulileyo evangela ukutshintsha kwemizi-mveliso ukuya kwilifu kwaye uncede ekubekeni iDataHero njengeqonga lokuqala le-BI elizenzela ngokwalo kwindawo yelifu.
Ngokuzenzekelayo ukuvavanywa kunye nokuSebenziswa kweNkqubo yakho yeSelfowni ngeApplause